चर्चित फुटबलर कृस्टियानो रोनाल्डोलाइ कोरोना सङ्क्रमण - Likhu Online
चर्चित फुटबलर कृस्टियानो रोनाल्डोलाइ कोरोना सङ्क्रमण
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार २१:०७ प्रकाशित
Portugal’s forward Cristiano Ronaldo gives the thumb up during the Euro 2020 Group B football qualification match between Portugal and Lithuania at the Algarve stadium in Faro, on November 14, 2019. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
पोर्चुगल तथा इटालीयन क्लब युभेन्ट्सका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ।
संक्रमण भएसँगै रोनाल्डोलाई पोर्चुगलको राष्ट्रिय टिमबाट अलग गर्दै होम आइसोलेसनमा पठाइएको छ।
३५ वर्षीय रोनाल्डोलाई कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नदेखिएको पोर्चुगिज फुटबल फेडेरेसनले जनाएको छ।
पोर्चुगिज टिमका अन्य खेलाडीलाई भने कोरोना परीक्षणमा नेगेटिभ नतिजा आएको छ।
रोनाल्डो हाल युइएफए नेसन्स लिग खेल्नका लागि राष्ट्रिय टिममा समावेस थिए।
यसअघि रोनाल्डोले सोमबार फ्रान्सविरुद्ध खेलेका थिए। सो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो।
पोर्चुगलले नेसन्स लिगमा बुधबार राति स्विडेनविरुद्ध खेल्दैछ।
समूहमा पोर्चुगल ३ खेलबाट ७ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानको फ्रान्सको पनि ७ अंक नै छ। क्रोएसियाको ३ अंक छ भने स्विडेन अंकबिहीन छ।
विश्वकप छनोट; नेइमारको ह्याट्रिमा ब्राजिलको उत्कृष्ट जित
विश्वकप छनौटमा ब्राजिलको सानदार सुरुवात
रोनाल्डो भर्सेज मेस्सि, को अब्बल ?
अन्तरास्ट्रिय फुटबलमा रोनाल्डोले पार गरे १०० गोल
CPL; अन्तिम खेलमा सन्दिपको राम्रो बलिङ भए पनि जमैका पराजित
३५ खेलाडी छान्दा पनि किन छानिएनन बिमल ?
भर्चुअल तेक्वान्दोतर्फ नेपालले दुई स्वर्ण हात पार्यो
रोनाल्डो बने पहिलो बिलियनर फुटबल खेलाडी
जुन १३ बाट बार्सिलोना उपाधि रक्षा अभियान सुरु गर्दै
स्पेनिस लालिगा फुटबल जुन १२ देखि सुरु हुने
बार्सिलाेना नापाेलीसँग बराबरीमा राेकियाे
सागका खेलाडिले अझै पाएन घोषित पुरस्कार रकम ।
खेल क्षेत्रमा उच्च लगानी रहेको छ : मुख्यमन्त्री l
तीन साता मैदान बाहिर कान्टे !